आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दुखद् निधन (भिडियो हेर्नुस्) – Classic Khabar
July 26, 2021 123
डाक्टर दीपाले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन्, मानिसहरूलाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर दीपा शर्मा वा सोशल मिडियासँग सम्बन्धित कसैलाई पनि यो अन्तिम क्षणहरू हुनेछन् भनेर सोचेकै थिएनन्। डा दीपा शर्मा किन्नौरको पहिरोमा उनको ज्यान गयो।
भारत हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा आइतवार हृदय दर्दनाक दुर्घटना भयो। एक लामो समय को लागि घर मा ब न्ध नबाट स्वतन्त्रता पछि, एक खुशीको समय बिताउन आएका पर्यटक पहिरोमा परे । पहिरोमा जम्मा नौ जनाको मृत्यु भयो। यसमा आयुर्वेद डाक्टर दीपा शर्मा पनि थिइन् जसले आधा घन्टा अगाडि उनको तस्विर पोष्ट गरेर लेखेकी थिइन् प्रकृति बिना जिवन छैन ।
दीपा शर्मा सोशल मिडियामा धेरै सक्रिय थिइन् । उनी पहिलो पटक एकल यात्रामा गइन्। दीपाले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन्, मानिसहरूलाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर उनको जिवनको यो अन्तिम यात्रा हुनेछ भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् ।
आइतबार घटना हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिला उनले ट्वीटरमा एक तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले लेखिन् कि मअहिले भारतको अन्तिम बिन्दुमा उभिएकी छु, जहाँसम्म साधारण नागरिकहरूलाई जान दिइन्छ। तिब्बत यसभन्दा ८० किलोमिटर अगाडि छ, जुन चीनले ओगटेको छ।
सोशल मीडियामा दीपा शर्माको यो तस्वीर मान्छेहरूले मन पराएका छन् । यस यात्राको आनन्द उनको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो, तर कसैलाई थाहा थिएन कि यो अन्तिम तस्वीर हो। सोशल मीडियामा उनका प्रशंसकहरू ३४ वर्षीया दीपा शर्माको आकस्मिक निधनबाट अचम्मित छन्।
Prevबिजय शाहीले सारालाई झुक्काएर ठ,गे कै हो भन्दै बिजयले खुलाए बिश्वाश नै नलाग्ने रहस्य – भिडियो सहित
Next४२ वर्षीय वर्षा दर्जीलाई कु,टपिट भएको पाँच दिनपछि मात्र पीडक नेपाल पक्राउ
जितुसंग दिपकले लिएकै हुन् त बदला ? जितु र दिपकले दिए एक अर्कालाई यस्तो जवाफ
सुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन्